Ajụjụ - YANXA (HK) INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge anyị chọrọ iji rụọ ọrụ anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gwaa onye njikwa ahịa anyị maka ịlele azịza ga - adị ire. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
can nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị, n'ụzọ 30% nkwụnye ego tupu oge eruo, 70% itule megide ndeputa B / L site T / T ma ọ bụ L / C na anya.
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ ime ka afọ ju anyị na ngwaahịa anyị. N'okpuru akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nchegbu ndị ahịa niile na ịchọta afọ ojuju gị.
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Express bụ ejikari ndị kasị na-kasị dị oké ọnụ ụzọ. Transportationgbọ njem ụgbọ mmiri bụ azịza kacha mma maka nnukwu usoro. Kpọmkwem ibu ọnụego nwere ike nyere gị akwụkwọ naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke iji ego, ibu ibu, nke njem wdg Biko kpọtụrụ anyị maka inwekwu ozi.